संगठन विस्तारमा डा. भट्टराई दक्षिण कोरियामा - राजनीति - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
कमला केसी दक्षिण कोरिया भदौ ३०
कोरियन विमानस्थलमा डा. बाबुराम भट्टराई
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराई कोरियामा आइपुगेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज (INS) दक्षिण कोरियाले आयोजना गरेको भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुन भट्टराई कोरिया आइपुगेका हुन्।
कोरियन पर्व छुसकको अवसर पारेर आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईसँगै प्रवास विभाग संयोजक नवराज सुवेदी र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज अष्ट्रेलिया संयोजक विनोद पौडेल आइपुगेका छन्।
कोरिया प्रवेश गर्न साथ बसाइ अवधिभर भट्टराईलाई स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा प्रदान गर्ने जनाएको छ। त्यसका लागि स्थानीय प्रशासनले कार्यक्रम स्थलको सुरक्षाका लागि २ जना प्रहरी समेत खटाएको छ।
नयाँ शक्ति कोरियाले शुक्रबार कोरियाको राजधानी सोलस्थित जोगेसा गुम्बाको हलमा दिनको ठिक १२ बजे कार्यक्रम आयोजना गर्दै छ। भट्टराईलाई अन्तराष्ट्रिय नेपाली समाज कोरियाका पदाधिकारी हरुले इन्छन बिमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए।
बिमान स्थलमा कोरियन सुरक्षाकर्मीसँगै पत्रकारहरु भेला भएका थिए। शुक्रबारको कार्यक्रम सकी भट्टराई शनिबार जापानमा हुने कार्यक्रममा भाग लिन जाने कार्यतालिका रहेको बताइएको छ।
शुक्रबार (१६ तारिक) मा औपचारिक कार्यक्रम समाप्त भएपश्चात कार्यक्रम स्थलमै पत्रकार सम्मेलन गरिने आयोजकले जनाएको छ।
प्रकाशित ३० भदौ २०७३, बिहिबार | 2016-09-15 20:30:14